IApartment eNgcono eBandholm eneTerrace
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAstrid - DANCENTER
UAstrid - DANCENTER unezimvo eziyi-302 zezinye iindawo.
I-Apartment enamanqanaba ama-3 abekwe ngqo malunga nehotele yaseBandholm. Ithuba lokuhla uye kwigadi ehambelana nayo, apho unokuhlala khona kwaye ujabulele ihlobo laseDanish. Hamba uye emanzini, malunga noku. Iimitha ezili-100 ukusuka kwindlu. Ndwendwela iKnuthenborg Safari Park okanye esinye seziqithi ezincinci ezikufutshane.
Uyilo: ikhitshi elivulekileyo(igumbi lokupheka (umbane), ihood, umatshini wekofu, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji(+ isikhenkcezisi)), Igumbi lokuhlala/ibhedi (iTV(isathelayithi, iziteshi zikamabonakude zaseDanish (DR1 kunye neTV2)), isidlali seDVD, iCD player, istiriyo iyunithi), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ibhafu okanye ishawari, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), mezzanine(ibhedi ephindwe kabini), iterrace, BBQ
Umbuki zindwendwe ngu- Astrid - DANCENTER
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bandholm